Ukuthengisa nge-Apple: Izifundo ezili-10 onokuzifaka kwishishini lakho | Martech Zone
Abahlobo bam bayathanda ukundinika ixesha elinzima lokuba ngumlandeli we-Apple. Ndinokubeka ityala ngokunyanisekileyo kuyo yonke into kumhlobo olungileyo, uBill Dawson, owandithengela isixhobo sam sokuqala seApple- iAppleTV… wandula ke wasebenza nam kwinkampani apho sasibaphathi bemveliso bokuqala ukusebenzisa iMacBook Pros. Kudala ndingumlandeli ukusukela ngoku kwaye, ngaphandle kweKhaya lasekhaya kunye neSikhululo senqwelomoya, ndinaso sonke isixhobo esinye. Ngesoftware nganye kunye nophuculo lwezixhobo, ndiyamangaliswa yinkqubo ehlanganiswe ngokuqinileyo eqhubeka nokuzisa iApple kubathengi bayo. Ndididekile kubaqeqeshi kumzi mveliso wam abaqhubeka nokuthatha iApple ngelixa beqhubeka betshintsha ngokuthe cwaka indlela esinxibelelana ngayo nokusingqongileyo ngobuchwephesha.
Njengoko benditshilo kumsonto kwenye yee-naysayers, usuku apho iFitbit yakho, iKhaya likaGoogle, isixhobo seWindows, ifowuni ye-Android, kunye neRoku ziya kusebenza ngaphandle komthungo. I-Apple inyanzela ukwenziwa kwezinto ezintsha kanye kwindawo ebuthathaka yomntu wonke okhuphisana naye… into yokuba bonke bazimele bodwa. Oko kwathethi, kuhlala kukho indawo yokuyila i-Apple. Ndingathanda ngokwenene ukubona izinto ezintsha ngakumbi kwizinto ezenzekelayo ekhaya. Ngokoluvo lwam, iAmazon iyazikhaba iimpundu zazo ngezakhono ezifumanekayo kwiEcho.
Kwanele ngokutsha kuka-Apple, masiqhubeke nentengiso yabo. Inye kuphela into endiyihloniphayo ngentengiso ka-Apple kukuba ijolise ikakhulu kwi ubuhle nobuhle yezixhobo zabo okanye amandla abantu bethatha ukungena nabo. Alithandabuzeki elokuba ukugxila kubuhle kuncede… ukuhamba kwivenkile ye-elektroniki kule mihla kwaye yonke ifowuni, ithebhulethi, okanye ilaptop oyibonayo yinto efanayo nezixhobo zeApple. Abantu bayazingca ngezixhobo abazisebenzisayo, kwaye ukutsala ukukhanya okuthe ngqo, okubhityileyo, ialuminium, ilaptop engaboli ebhegini yakho enomboniso weretina kuhlala kuziva kulungile.
Nanku umzekelo omkhulu apho babonisa khona iPad Pro:
Isakhono kwiintengiso zabo zihlala zindifumana. Nokuba kungumdaniso nje kumculo ovela kwintengiso yentsusa ye-iPod, okanye kwintengiso yabo engaphaya kweMac ebonisa abanye babona bantu banetalente emhlabeni, iApple icofa iimvakalelo zakho.
Iqela leWebhusayithi liqokelele iZifundo ezili-10 ezivela kwisicwangciso-qhinga sentengiso sika-Apple ezibandakanya zonke iinkalo ekugxilwe kuzo kwinkampani. Kwezi infographic zilandelayo, Izifundo ezili-10 zeNtengiso ezivela kuApple, zibandakanya:
Gcina It Simple -Kuthengiswa kweapile alukho ngokwalo naluphi na ulwazi malunga nokuba ungazithenga phi kwaye njani iimveliso zabo. Endaweni yoko, iintengiso kunye neminye imiyalezo yokuthengisa zichanekile- zibonisa imveliso kwaye ziyivumele izithethele.
Sebenzisa ukubekwa kweMveliso -Ukuba nje umntu oshukumisayo wabelana ngemveliso yakho kwaye ubonise abalandeli babo ukuba iluncedo kangakanani na, imbewu iyatyalwa kwaye kukhokelwa kwenziwa.
Ukuphononongwa koPhononongo -I-Apple yenze kakuhle ukufumana uphononongo kubathengi bayo.
Gxila kwiNgcaciso yexabiso eliNgekho kwiXabiso -Naso nasiphi na isixhobo esibonelelwa yiApple, bayaqinisekisa ukuba umthengi uziva ngathi kufanelekile ukuhlawula ixabiso eliphezulu. Inye into, ngokoluvo lwam, ziiadaptha zabo.
Yimela into -Bonisa kubaphulaphuli bakho ukuba uphawu lwakho lunokuhlala kuthembekile ekuhambiseni oko bakumeleyo.
Yenza amava, hayi iiMveliso nje -Nawuphi na umntu angenza imveliso, kodwa ayisiyiyo ininzi enokwenza amava kumthengi angalibalekiyo kwaye abarhwebeshe ukuba babuyele kwakhona.
Thetha nabaphulaphuli usebenzisa ulwimi lwabo -Ngokuphepha amagama kunye neenkcazo ezisebenza kuphela ukudida kunye nokugqithisa, u-Apple ufumene indlela yokufikelela kubathengi kwinqanaba elitsha ukhuphiswano olungekacaciswa.
Ukuphuhlisa i-Aura kunye neMfihlakalo malunga nale nto uyenzayo Ngokwesiqhelo, abathengisi baxelela abathengi babo ngayo yonke into malunga nemveliso, kodwa iApple idala ukonwaba ngakumbi ngokubamba ulwazi kunye nokwenza ukuba wonke umntu acinge.
Ukubhena kwiimvakalelo -Iintengiso zika-Apple zibonisa abantu abonwabileyo ukuba nexesha elimnandi nee-iPads kunye nee-iPhones zabo kunokuba bajonge ubungakanani bememori okanye ubomi bebhetri.
Sebenzisa ezibonwayo -Ukuba isetyenziswe kakuhle, ividiyo kunye nemifanekiso kunye nesandi esinyanzelisayo sinempembelelo enkulu kumava abathengi.
tags: apileuphawu lweapileuyilo lweapileintengiso yeapileiapile elinokubakhoUkufaka uphawuuqhagamshelwanonefutheiPadIPro prourhweboqhinga urhweboIiVidiyo zeNtengisoEzinokwenzekaelulaimbonakalo